हामी इलाम क्षेत्र न एक को मात्रै हैन पुरै इलामको विकासमा ठोस काम गर्ने छौँ - खनाल
इलाम क्षेत्र न १ मा बाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधि सभासदस्य उम्मेद्धार एमाले बरिष्ठ नेता पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल अहिले चुनावी प्रचारप्रसारको क्रममा हुनुहुन्छ । प्रचारप्रसारकै क्रममा हामीले उहाँसगँ केहि कुराकानी गरेका छौँ कुराकानीको पुर्णभाग रेडियो फिक्कल ९०.६बाट प्रसारण गरीसकेका छौँ ।सोहि कुराकानीको केहि अशंः
प्रस्तुति राजकुमार दहाल अभिलाषी
मसिंर १७ इलाम
तपाईलाई स्वागत छ ?
चुनावको माहोलमा हुनुहुन्छ तपाईको चुनावी एजेन्डा ?
मुख्यकुरा संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हो । अर्को मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण गर्नु विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनु, र दिगो शान्ति स्थापना गर्नु, गर्दै राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने र नेपाली जनसमुदायको जीवनस्तर उठाउने, गरिबी उन्मूलन, बेरोजगारीको विकराल समस्या समाधान गर्नेजस्ता विषय हाम्रा मुख्य एजेन्डा हो । यो निर्वाचनपछि स्थायी सरकार र आर्थिक समृद्धि र आर्थिक क्रान्तिको दिशातर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने र देशलाइ समृद्धितर्फ बढाउने नै हाम्रो मुख्य योजना हो बाम गठबन्धन र म आफु त्यसै तर्फ दृढ छु ।
प्रतिस्पर्धा त तिब्र होला नि के छ जित्ने आधारहरू ?
हामी एउटै पाटी मात्रै हुदा पनि इलाममा बलियो थियौ अहिले त बाम गठबन्धनले झन हामी शक्तिशाली भएका छौँ । इलाममा वाम गठबन्धनको स्थिति छर्लंग छ । अहिले नेकपा एमालेमा अन्य पार्टी छोडेर आउनेको लर्को छ । आजै पनि एक सय बढीलाई टीका लगाएर आएको छु । एमालेलाई जनताले माया गरेका छन् । एमालेमाथि जनताको विश्वास छ । त्यो विश्वास भनेको मैले विगतमा जे प्रतिबद्धता गरें त्यो पूरा गरेको छु । ्मेरो जित पक्का छ ।
लामो नेतृत्वमा रहँदा पनि इलामको विकास सोचेजति नगरेको आरोप छ नि तपाईमा के भन्नु हुन्छ ?
त्यो त बिपक्षीहरुलाउने आरोप हो । जनताको आरोप हैन । सत्तामा बस्दा होस् अथवा बाहिर बस्दा होस् मैलै इलामको इलामेली जनताको पक्षमा बिकासको पक्षमा काम गरेको छु जे बोलेको छु त्यो गरेको छु अर्को कुरा एमालेले जनताको हितमा काम गरेको छ । इलाम क्षेत्र १ कै कुरा गर्ने हो भने पनि विकास निर्माणका काम धेरै भएका छन् । गाउँ–गाउँमा विद्युतीकरण गरिएको छ । गाउँ–गाउँमा बाटो पुगेको छ । द्वन्द्वमा ध्वस्त भएका संरचनाहरू हामीले बनाएका छौं । कतिपय स्थानमा २०६४ को चुनावमा म हिँडेर गएको थिएँ । यसपटक गाडी चढेर गइरहेको छु । इलाममा ठूलो प्राविधिक शिक्षालय ९सीटीईभीटी० को निर्माण भएको छ । इलाममा विमानस्थलको क्षेभइरहेका छन् । यी सबै कुराको सुरुवात एमालेले गरेको हो । यहाँ करोडौंको होइन, अर्बौंको बजेट आएको छ । जुन मेरो कारणले आएको छ यसपटक पनि मैले निर्वाचित हुदा जति गर्न सक्छु अरुले एक छेउपनि गर्न सक्दैनन । त्यति मात्र होइन, मेची राजमार्ग निर्माणका लागि कसले काम ग¥यो रु फिक्कल–पशुपतिनगर कालोपत्रे गर्न कसले पहल ग¥यो रु इलाममा टेलिफोन विस्तार गर्न ऊ बेला कसले काम ग¥यो रु त्यो कुरा यहाँका जनतालाई थाहा छ, मैले भन्नै पर्दैन ।
रत्नकुमार बान्तवा पोलिटेक्नीकल इन्सीच्युट को कुरा गर्दा तपाईले आफनो क्षेत्र क्षेत्र न १ मा नगरी आफनै जन्मभुमि साखेजुङ्गमा स्थापना गर्नु भयो भन्ने आरोप छ नि ?
ह्ैन यसलाई म आरोपको रुपमा लिन्न झलनाथ खनाल १ न क्षेत्रबाट जितेर गयो प्रधानमन्त्री भयो १ न को प्रधानमन्त्री हो र प्रधानमन्त्री त म देशको हो । त्यकारणले प्रधामन्त्री भईसकेपछि सिगों देशलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ जिताउने काम पो १ नं ले गरेको हो त । यसपटक पनि म जित्छु यसपटक जितेपछि मानौ पाटीले मलाई राष्ट्रपति बनायो राष्ट्रपति बनाएमा म यहाँको मात्रै राष्ट्रपति हुदिननि त्यसो हुनाले त्यो साना चित्त भएकाहरुले गर्ने कुराहो । मैले प्रधानमन्त्री भएपछि आफनो जिल्लाको लागि केहि गर्नु पर्छ भनेर रत्नकुमार बान्तवा पोलिटेक्नीकल इन्सीच्युट सुकिलुम्बा बिमास्थल बनाए । अब एक नम्बर क्षेत्रको लागि पनि गर्ने हो गर्छु गरिरहेको छु बिकासका कामहरु । गाउँगाउँ जानेक्रममा जनताले मलाई धन्यवाद दिईरहेका छन ।
फाल्गुनन्द विमानस्थल पनि अलपत्र छ जुन तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास भएको हो ?
बिमानस्थलको निमार्ण कार्य सुरुमा अगि बढेपनि बिचमा रोकियो तर अहिले विमानस्थलको काम अघि बढेको छ । म प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछिका सरकारले हाम्रो विमानस्थललाई पैसा छुट्याएनन् । त्यसैकारण निर्माणमा ढिलाइ भयो । अब त हाम्रो सरकार बन्छ त्यसैले अव ढुक्क हुनुस गठबन्धनको सरकारले त्यसलाई पूर्णता दिन्छ हामी सगँ त्यसता थुप्रै योजना छ जुन हाम्रो घोषणा पत्रमा तपाईले हेर्न सक्नु हुन्छ । अरु पुल बाटो हरु सगै पुलहरु बन्नेकाम अगि बढेको छ ।
यो पटकको योजना के छ तपाईको ?
इलामको ३ क्षेत्र अहिले २ वटा निर्वाच क्षेत्र भएको छ । पहिला क्षेत्र ३ मा परेको जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र विकासको ओझेलमै छ । भर्खरै मात्र उत्तरी क्षेत्र सन्दकपुर, माबु, माईमझुवा, देउराली, माईपोखरी, नयाँबजार, प्याङ, सोयाङ, नामसालिङ हुँदै त्यहाँका सर्वसाधारण जनतालाई भेटेर आएँ । त्यहाँका जनताको आवश्यकता, इच्छा र चाहना बुझ्दा त्यो क्षेत्रमा हामीले विकासका थुप्रै आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्नेछ ।
सन्दकपुर डाँडा इलामको प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा लिइन्थो । त्यसको अवस्था पनि दयनीय छ । नेपालको डाँडो भए पनि भारतले प्रयोग गरेको स्पस्ट छ । अब सन्दकपुरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी अघि बढ्नु छ । एमालेकै पहलमा सन्दकपुरसम्म खोलिएको मोटर बाटोको ट्र्याकलाई पूर्णता दिने र माबुथामदेखि केबलकार दौडाउने सपना मैले देखेको छु, त्यो पूरा हुन्छ । त्यस्तै, केबलकार अन्तुमा पु¥याउनु छ, त्यो पनि मरो सपना नै हो म जनताको सपनाहरु परा गर्दै नेपाललाई समग्र इलामलार्ई बिकासको मार्गमा पुराउन चाहान्छु ।।
इलामको कृषि क्षेत्रको समस्या छ चिया दुधको बजार बिस्तार हुन नसकेको कुरा छ त्यता तर्फ कसरी हेनु भएको छ ?
चियाको बिस्तार गर्नु पर्छ भनेर पहिला देखिनै सोचेको कुरा हो ।मैले प्रतिनिधित्व गर्दा इलामको डाडाकाडामा चिया थिएन तर मैले किसानलाईभने इलाममा चिया बिस्तार गर्र्नु पर्छ किसानहरुले चिया लगाए तर मैले यहा कारखाना दिन सकिन यो त पुजिँपति हरुले दिने हो । चिया बगानको बिकासमा राज्यले नमुना दिन सक्नु पर्छ । तर राज्यले किसानलाई अवसर दिन सकेका छैन । राज्यले चिया बगान सञ्चालन किसान लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ अर्को चियाको उचित मुल्य किसानले पाउँन सकेका छैनन चियाको उचित मुल्य तोक्न राज्यले ध्यान दिनु पर्छ अव हामी त्यतातर्फ ध्यान दिन्छौ अर्गानिक चियालाई अव प्रथामिक्ता दिन्छौँ हामी किसान मुखि निति बनाउछौँ इलामका अ हरुको लागि गर्नु पर्ने काम भएको छ किसानहरु आफै लागिरहेका छन दुधको लागि १ न. क्षेत्र प्रख्यात छ गाइपालनका लागि किसानमुखि कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ मैले कृषि मन्ञालय सगँ कुराहरु छलफलहरु गरीरहेको छु अब म जनताले अनुभुत गर्ने गरी कृषिमा काम गर्न प्रयत्न गर्ने छु । अरु त हाम्रा घोषणा पत्रमा पनि छ तपाई हेर्न सक्नु हुन्छ बाकी म के के गर्छु भन्ने बारे मैले चुनावी अभियानको क्रममा जनता समक्ष गाउँगाउँ जाने क्रममा भनिरहेको छु ।
बिगतमा पनि दलहरुले ल्याएका सबै घोषणा पत्रका कुरा लागु भएन ?
हैन बिगतमा स्थीर सरकार बन्न सकेन तर अव निश्चित छ बाम गठबन्धनको पा्ेजिशन राम्रो हुन्छ २१ ग्ते पछाडी हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आउछ त्यपछि हामी घोषणा पत्र अनुसारको काम गर्न सक्षम हुने छाँै । बिगतमा अस्थीर सरकार लगायतको कारणले हो तर हामी सरकारमा रहेका बेला सके सम्म हामीले ठोसकाम गरेका छौँ जुन सबैलाई थहा छ ।
मुलुकलाई समृद्धितर्फ कसरी लान सकिन्छ ?
एमालेले २०६२ ६३ को जनक्रान्तिको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै संविधान निर्माण गर्ने काममा प्रमुख भूमिका निर्वाह ग¥यो । अब स्थायी सरकारका लागि गठबन्धन निर्माण भएको छ । स्थायी सरकार नबनेसम्म देशमा समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय विकास, बेरोजगारी, गरिबी, उन्मूलन, लोडसेडिङ उन्मूलनको काम यो गठबन्धनले मात्र गर्छ । त्यसो हुँदा गठबन्धन नेतृत्वमा मात्र देश
समृद्धितर्फ अघि बढ्छ । जब देश अगि बढछ सगै इलाम पनि अगि बढछ अब इलामले पनि मुहार फेर्छ मैले इलामको लागि गरेको छु धेरै कुराहरु र अझै धेरै गरेर इलामलाई अगि बढाउनु छ । जहासम्म समृद्धि नेपालको कुरा छ स्थीर सरकार बामपन्थिको सरकार बने पछि तपाई आफै अनुभुत गर्नु हुनेछ ।
तपाई त राष्ट्रीय राजनितिमा उच्च नेता फेरी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्न पनि त सक्नु होला ?
हेर्नुस म पाटीको जिम्मेवार तहमा रहिसकेको मान्छे पाटीले आवश्यक पर्दा खोज्छ जिम्मेवारी दिन्छ लिनु पनि पर्छ । अर्को कुरा के भने म लाई राष्ट्रपतिको लागि यस अगि पनि अफर आएकै हो तर म मानिन किनकी राष्ट्रपति भए पछि एक हिसावको सक्रिय राजनिति सकिन्छ म अझै एक्टिभ राजनितिमै रहन चाहान्छु तर अब म प्रधानमन्त्री पनि भै सके पाटीले जिम्मेवारी दिए राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पदमा रहेर जनताको सेवा गर्न सकिन्छ ।
मेचिको पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभयो अव इलामको राष्ट्रपति वा इलामबाट निर्वाचित नेता राष्ट्रपति बनेर फेरी नाम पो राख्नु होला कि ?
अब तपाईको मुखमा दुध र भात होस । हेर्नुस म फेरी त्यो अवसर आए बन्न सक्छु किनकी मैले पाटीको देशको उच्च तहमा रहेर जनताको सेवा गरे्को छु त्यो अवसर नआउला भन्न सकिन्न यदि त्यसो भए इलामको बिकासमा झन धेरै सहज हुन्छ । त्यपछि हामी इलाम क्षेत्र न एक को मात्रै हैन पुरै इलामको बिकासमा ठोस काम गर्ने छौँ हेर्नुस इलामको लागि मेरो केहि सपनाहरु छन् जुन पुरा गर्न सके इलामको मुहार फेरीन्छ जस्तो भन्नुस पर्यटन कृषि स्वरोजगार उद्योग अर्गानिक खेति बाटाघाटा पुलहरु बिद्यालय खानेपानी शिक्षा स्वश्स्य युवा लक्षित कार्यक्रम के के छ छ जुन म गरेर छाडछु एक समृद्ध राष्ट्र बिकशित नेपाल सुन्दर शान्त हराभरा इलाम बनाएर छाड्ने हो जुन म गरेर छाड्छु ।